3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းအကြောင်း အားလုံး - အခမဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
ပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်ရေးတွင် အပန်းဖြေကဏ္ဍနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် နည်းပညာတို့၌ အသုံးချမှုနယ်ပယ်များ ပိုများလာပါသည်။ ဟိ 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းသည် ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏အနာဂတ်သည် ပိုမိုတောက်ပလာမည်ဖြစ်သည်။ အခြားသော သမားရိုးကျ ကုန်ထုတ်နည်းများဖြင့် ယခုအချိန်အထိ မလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် DIY ချစ်သူများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် တကယ့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကို သင်သိထားသင့်သည်။
3D ပရင့်ထုတ်ခြင်း စတင်ခြင်း လမ်းညွှန်
ဤလမ်းညွှန်တွင် အရိုးရှင်းဆုံးမှ အရှုပ်ထွေးဆုံးအထိ သင်ယူနိုင်ပါသည်။. voxel ယူနစ်ကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် 3D ပရင်တာဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်ကြောင်း၊ ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းအနည်းငယ်၊ မော်ဒယ်ကို ရိုက်နှိပ်သည့်အချိန်အထိ မော်ဒယ်များ၏ ဒီဇိုင်းအဆင့်ဆင့်၊ လိုအပ်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုဖြတ်၍ သွားခြင်း၊ အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းအဆင့်များနှင့် ဖြစ်နိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များ (စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပညာရေး၊ အပန်းဖြေ၊ အနုပညာ၊ ဆေးပညာ၊…)။
STL နှင့် အခြားဖိုင်ဖော်မတ်များ
STL ဖော်မတ်အကြောင်း အချက်အလက် ပုံနှိပ်ခြင်း မော်ဒယ်များအတွက် အခြားသော ဖော်မတ်များ နှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြောင်းလဲမှုများ နှင့် လိုအပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ။
နှင့်ပတ်သက်ပြီး သိလိုသမျှ 3D ပရင်တာ အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၏ လက္ခဏာများ ရှိပြီးသား- နည်းပညာများ၊ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ၊ အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက်၊ ဇီဝပရင်တာများ၊ 3D ခဲတံစသည်ဖြင့်၊ တစ်ခုချင်းစီ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ။
3D Printer ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ
အဖွဲ့သစ်ကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သောအခါတွင် ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် သံသယများစွာ ပေါ်လာပါသည်။ 3D ပရင်တာ ဘယ်လိုရွေးမလဲ။ မင်းရဲ့သံသယတွေကို ရှင်းပစ်နိုင်တယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များ၊ အမျှင်များ၊ အစေးနှင့် စက်မှု 3D ပရင်တာများ၊ အစားထိုး 3D ပုံနှိပ်စက်များ၊ စျေးနှုန်းများ၊ ပရင်တာတပ်ဆင်နည်းနှင့် ပထမအဆင့်အဆင့်များအလိုက် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်များကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံနှိပ်ခြင်းစတင်ရန်။
စျေးပေါတဲ့ 3D ပရင်တာ ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
အကြံပြုချက်အချို့ အကောင်းဆုံးစျေးပေါ 3D ပရင်တာများ၏ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် မော်ဒယ်များ သငျသညျမဝယ်နိုင်ပါ။
အိမ်အတွက် ဘယ် 3D ပရင်တာ ဝယ်ရမလဲ
ကောင်းမွန်တဲ့ features တွေပါတဲ့ အိမ်အတွက် တစ်ခုခုကို ရှာနေပေမယ့် ဈေးမကြီးဘဲ၊ ဒီမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ဝါသနာရှင်များအတွက် 3D ပရင်တာများ။
ဘယ် resin 3D ပရင်တာ ဝယ်ရမလဲ
တစ်ချို့က အကောင်းဆုံး အစေး 3D ပရင်တာ အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် မော်ဒယ်များ ချည်မျှင်မလုံလောက်သောသူများအတွက် ရွေးချယ်မှုတွင် အမှားမမှားစေရန်။
ဘယ်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး 3D ပရင်တာ ဝယ်ရမလဲ
အကယ်၍ သင်သည် ၎င်းကို တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက သို့မဟုတ် သင့်တွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိလျှင် သင်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး 3D ပရင်တာ လိုအပ်သည်။ဤသည်မှာ အကောင်းဆုံးအချို့ဖြစ်သည်။
3D ပရင်တာများနှင့် သစ်စေးများအတွက် ချည်မျှင်များ
သမားရိုးကျ ပရင်တာများတွင် မင်ကျည်တောင့်များနှင့် တိုနာများကို ဝယ်ယူရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ 3D ပရင်တာများတွင် သင်သည် အခြားအမျိုးအစား လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အမျှင်များနှင့် အစေးများကဲ့သို့သော စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများ. ဤသည်မှာ ဤထုတ်ကုန်များအတွက် အကြံပြုချက်အချို့နှင့် သင်ရိုက်နှိပ်နိုင်သော ပစ္စည်းအားလုံးဖြစ်သည်။
3D ပရင်တာများအတွက် အပိုပစ္စည်းများ + ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လမ်းညွှန်
Find သင်လိုအပ်သမျှအစိတ်အပိုင်းများ သင်၏ 3D ပရင်တာအတွက်- ပံ့ပိုးမှုများ၊ ကုတင်များ၊ PEI စာရွက်များ၊ အပူကူးထည့်ခြင်း၊ extruders၊ nozzles၊ PTFE ပြွန်များ၊ stepper motors၊ power supply၊ timing belts၊ pulleys၊ bearings၊ thermistor၊ cooling၊ lubricants၊ lamps၊ resin tank နှင့် အခြားအရာများ။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် 3D ပရင်တာ (ချိန်ညှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး၊ ...) နှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပြဿနာများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဖြေရှင်းနည်းများကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းရမည်ကို သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါတွေကတော့ တချို့ပါ။ အကောင်းဆုံး 3d စကင်နာများ သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သို့မဟုတ် အပန်းဖြေပရောဂျက်များအတွက် သင်ရနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင့် 3D ပရင်တာပေါ်တွင် ပရင့်ထုတ်ရန်၊ ၎င်းကို ပြန်လည်ထိတွေ့ရန်၊ စသည်တို့ကို ဒစ်ဂျစ်တယ် 3D ဖော်မတ်သို့ တင်ပို့နိုင်စေရန်၊ ဤစက်ပစ္စည်းများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အမျိုးအစားများ၊ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးကို ရွေးချယ်နည်း စသည်ဖြင့် သင်လည်း လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အ 3D ပရင်တာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာကြီးထွားလာရှိနေခြင်းနှင့်သောသံသယရှိပါတယ် ပုံနှိပ် 3D တိုးတက်နေသည်။ ဤကဏ္နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပရင်တာနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအမျိုးအစားအကြောင်းသင့်အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများကိုပေးမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ခဲ့လျှင်သင်ဟာကွန်ယက်ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရောက်ရှိပြီးရာပေါင်းများစွာသောအရာများကိုလေ့လာသင်ယူနေသောကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပါ။
por ဣဇာက်သည် လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
ကောင်းသောအစေး 3D ပရင်တာရှာဖွေနေပါက၊ ဤလမ်းညွှန်တွင် အကြံပြုထားသော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် မော်ဒယ်အချို့နှင့်...
3D စကင်နာကို ဝယ်ပါ- အကောင်းဆုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ 3D ပရင်တာပေါ်တွင် သင်ရိုက်ထုတ်လိုသော အစိတ်အပိုင်း၏ ဂျီသြမေတြီကို သင်ကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည့်အပြင်၊
3D ပရင်တာ အပိုပစ္စည်းများ ပြုပြင်ခြင်း။
3D ပရင်တာများသည် အခြားသော စက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ ပြဿနာများနှင့် ကွဲအက်မှုများ ရှိသောကြောင့် သင့်လျော်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းကို သိထားသင့်သည်...
3D ပရင်တာများနှင့် အစေးအတွက် ချည်မျှင်များ
တိုနာများနှင့် မင်ကျည်တောင့်များသည် 2D ပရင်တာများ၏ စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများဖြစ်သော်လည်း၊ 3D ပရင်တာများသည် အခြား...
ပေါင်းထည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည် စက်မှုကဏ္ဍတွင် အလားအလာအရှိဆုံး အရင်းအမြစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဒီလို ထုတ်လုပ်မှု အမျိုးအစား...
ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးပေါသော ပရင်တာများအတွက် အကြံပြုချက်အချို့ကို ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ သင်သည် ပိုကောင်းသောအရာကို ရှာဖွေနေပါက အဘယ်နည်း။ ဒါဆို ဒီတခြားဆောင်းပါးမှာ...
por ဣဇာက်သည် လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
သင်သည် 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းကို နှစ်သက်ပါက၊ သင်သည် Octoprint ပရောဂျက်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုမည်ဖြစ်သည်။ ကုဒ်ဆော့ဝဲလ်တစ်ခု...
စျေးပေါသော 3D ပရင်တာ အမျိုးအစားများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များ ပိုများလာသောကြောင့် ရွေးချယ်ရန် ခက်ခဲလာသည်...
Ultimate Guide- 3D ပရင်တာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ဝယ်တဲ့အခါ သံသယတွေ များလာတဲ့အခါ၊ အရေးကြီးဆုံး လက္ခဏာတွေကို သိခြင်းထက် ပိုကောင်းတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။
STL ဖိုင်များ- ဤဖော်မတ်နှင့် ၎င်း၏ အခြားရွေးချယ်စရာများအကြောင်း သင်သိလိုသမျှ
အကယ်၍ သင်သည် 3D ပုံနှိပ်စက်လောကသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါက၊ ၎င်းကို တစ်နေရာထက်ပို၍ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်မှာ သေချာပါသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D ပရင်တာများကမ္ဘာကို မိတ်ဆက်ခြင်းတစ်မျိုးကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခုတော့ အလှည့်ရောက်ပြီ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်ထုတ်လုပ်သူ Sakata3D မှ PLA 850D3 နှင့် 870D3 တို့ကိုဆန်းစစ်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Smart ပစ္စည်းများ 3D ၏အထင်ရှားဆုံးသောအမျှင်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
ပုံနှိပ်အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးစေဘဲသင်၏ 3D ပရင်တာကိုပိုမိုမြန်ဆန်အောင်ပြုလုပ်နည်း
FFFWORLD မှ PLA CARBON ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်
Prusa i3 MK3, Josef Prusa မှပရင်တာအသစ်
Raspberry Pi ကိုသုံးပြီး 3D Scanner ကြီးတစ်ခုဖန်တီးတယ်
သင်၏ Raspberry Pi ကိုဤအမှုကိစ္စများနှင့် ၀ တ်ဆင်ပါ
လုံးဝအခမဲ့ 3D စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်အရာ Qlone
XYZPrinting 3D Scanner ကိုစကင်နာစစ်ဆေးခြင်း
KIT BQ Hephestos ရှိ 3D ပရင်တာ၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း
Wanhao ပုံတူ37D Printer ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Fidget Spinner၊ ငါတို့တည်ဆောက်နိုင်သောကစားစရာတစ်ခု
ကျွန်ုပ်တို့သည် FFFworld အမျှင်များဖြစ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ PETG, ABS, Metal နှင့် PLA တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
စပိန်ထုတ်လုပ်သူ Leon 3D မှ Legio 3D ပရင်တာအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ပြီးပြည့်စုံသောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် BQ Witbox32D ပရင်တာကိုစမ်းသပ်ခြင်း
ဤ Leon3D ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြင့်သင်၏ 3D ပရင်တာကိုရှုးစက်ဖြင့်ထွင်းဖောက်နိုင်သည်